Nike + Run Club dia manampy hafatra fampaherezana ho an'ny iPhone sy ny Apple Watch Series 3 | Vaovao IPhone
Nike + Run Club dia manampy hafatra fampaherezana ho an'ny iPhone sy Apple Watch Series 3
Nike dia manome ny fangatahana Nike Run Club ho an'ny mpihazakazaka rehetra, fampiharana izay ahafahantsika mahazo endrika ary koa manomana fiomanana ara-batana tsara indrindra hahafahana manao fifaninanana. Nike no namorona ity fampiharana ity miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny brokers sy torohevitra manam-pahaizana an'arivony mba hahafahantsika manatratra ny tanjontsika amin'izany miaraka amin'ny fahafinaretana.
Ity fampiharana ity dia mamela antsika araho ny firazanana rehetra ananantsika, manorata fiofanana manokana natao hifanaraka amin'ny fandaharam-potoanay sy ny haavontsika, ho fanampin'ny vaovao izay nitondranay ny fanavaozana farany ity fampiharana ity, fanavaozana iray izay ahafahan'ny namantsika mandefa hafatra fampaherezana ho antsika mandritra ny hazakazaka na fiaran-dalamby ataonay.
Nike dia te-hanararaotra ny vaovao izay nentin'i Apple antsika tamin'ny taranaka fahatelo an'ny Apple Watch, taranaka fahatelo izay ankoatry ny manampy altimeter, koa dia nanamboatra fanamafisam-peo tamin'ny fitaovana, mba hahafahantsika mihaino ireo hafatra fampaherezana izay ampitain'ny namantsika antsika, ankoatry ny afaka mihaino an'i Siri rehefa maneho hevitra momba ny zavatra rehetra isika.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Nike + Run Club kinova 5.9.0
1.1 Inona no vaovao ho an'ny iPhone
1.2 Inona no vaovao ho an'ny Apple Watch
Inona no vaovao ao amin'ny Nike + Run Club kinova 5.9.0
Inona no vaovao ho an'ny iPhone
Hafatra fampaherezana. Ny fihazakazahana irery dia mankaleo. Raha ampahafantarintsika ny namantsika rehefa mihazakazaka isika na manao fifaninanana dia afaka mandefa hafatra fampaherezana ho antsika izy ireo mba hahatratrarantsika ny tanjona araka izay tratrany araka izay tratra. Raha te hampandeha ity asa ity dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Fikirakirana hazakazaka, fanehoan-kevitra an-tsary, hafatra fampaherezana audio.
Inona no vaovao ho an'ny Apple Watch
Fa raha mivoaka hihazakazaka fotsiny izahay amin'ny Apple Warth Series 3 miaraka amin'ny fifandraisana LTE, dia misy any Espana na Mexico izao isika, afaka mandray hafatra fampaherezana ihany koa isika amin'ny alàlan'ny mpandahateny efa niasa. Talohan'izay dia tsy maintsy miditra amin'ny fikirakirana fampiharana isika mba hampiasana ny safidin'ny hafatra Fampaherezana.
Tantaran'ny hetsika vaovao ahafahantsika mahita ny angona ireo hazakazaka 5 farany vitantsika.
Ny tahirin-kevitra momba ny haavo dia voatahiry ao amin'ity rindrambaiko ity ihany fa amin'ny Apple Watch Series 3 ihany, izay manana altimeter.
Nike Run Club: fanamby sy trackermaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Nike + Run Club dia manampy hafatra fampaherezana ho an'ny iPhone sy Apple Watch Series 3
kilalao dia hoy izy:
izay nataoko runtastic nandritra ny 2-3 taona.
Nijanona tamin'ny fampiasana azy aho hatramin'ny fanavaozana, naka 50km izy ireo ary naka ny zava-bita.
Ny hack Yahoo dia nisy fiatraikany tamin'ny kaonty rehetra nananan'ny orinasa tamin'ny 2013